နွေဦးတော်လှန်ရေးစကားဝိုင်း – PVTV Myanmar
·3months ago ·13 Comments
ဆွေးနွေးသူ – ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ၊ မင်းကိုနိုင်၊ နေဘုန်းလတ်
2021-10-21 at 3:53 PM
ဒီ gp ကို join ထားပါ
Nyein Chan Thu says:
2021-10-21 at 4:08 PM
Thet Myint says:
2021-10-21 at 4:20 PM
Public Voice Television ခေါင်းစဉ်အရမ်းကြိုက်တယ်။
26 July က ဖတ်ရတဲ့ စာတပုဒ်
NUG ကို အစိုးရိမ်ဆုံး ၂ ချက် ရှိတယ်။ အဲဒီ ၂ ချက် မပိုင်ရင် တော်လှန်ရေး ကျရှုံးလိမ့်မယ်။
၁… အလှူငွေ ကောက်ခံတာ အရမ်းအားနည်းတယ်။ တပ်မတော်တခု run နိုင်ဖို့ တလကို ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ရဖို့လိုတယ်။ တလ USD 20 mil. ဆိုတာ ဘယ်သူပြောသလဲ။ ဦးလွင်ကိုလတ် ပြောတာ။ Gofundme မှာ ၂ ပတ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၉ သန်းနဲ့ တခါပဲ ရလိုက်တယ်။ အခု အလှူခံနေတဲ့ ပုံစံက အလုပ်ဖြစ်ပုံမရဘူး။ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နဲ့ ဈေးရောင်း လေထီးခုန်ပြီး fund ရှာနေရတယ်
၂… ဆန်မရှိ စောက်စားကြီး ဆိုသလို ငွေသာ ရအောင် မရှာနိုင်တာ။ သေနတ်ကျတော့ အမေရိကန်လုပ်မှ ကိုင်ချင်ကြတယ်။ ကိုယ်တိုင် တွင်ခုံနဲ့ လုပ်လို့ရမယ့် နည်းပညာကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ စက်ရုံထုတ်လက်နက် ဝယ်ဖို့ကလည်း ခုချိန်အထိ လက်နက်ထုတ်တဲ့ နိုင်ငံ .. ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှ ရွှေလမ်းငွေလမ်း မဖောက်နိုင်သေးဘူး။ မှောင်ခိုဈေးကွက်က ဈေးကြီးပေး ဝယ်ဖို့ကလည်း ငွေမရှိ တိုင်ပတ်နေပုံပဲ။ သင်တန်းဆင်းတွေမှာ လက်ဗလာနဲ့ ။ အချိန်တွေ ဖြုန်းပစ်နေတယ်။ မှောင်ခိုလည်း မရ၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ အချိန်မရှိရင် ဝါးချွန်နဲ့ တက်ထိုးရမယ့် အဖြစ်ရောက်သွားမယ်။
2021-10-21 at 4:37 PM
2021-10-21 at 4:46 PM
2021-10-21 at 4:53 PM
Std Nat says:
2021-10-21 at 5:02 PM
ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ ကြောက်စိတ်ထက် ပိုပြီးရှိနေမယ်ကြဆိုရင် ပန်းတိုင်ရောက်မယ့်ခရီးအတွက် အချိန်ပိုပေးရမယ်။
အဲ့လိုရှိသင့်တဲ့ ကြောက်စိတ်ထက် မပိုတဲ့စိတ်ကို လူတိုင်း လူတိုင်းက ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပန်းတိုင်ဆီ အမြန်ဆုံး ရောက်ကြမယ်။
တွေးမယ့်သူတွေများလာရင်တော့ အဲ့ဒီ ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ခရီးက ပိုပြီးကြာနိုင်မယ်။
ဆွေမျိုး၊ မိသားစု နဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်မှုမရှိသေးဘူး၊
အေးကွ ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ ကြားနေ ဝါဒဘဲကောင်းပါတယ်တို့၊
နိုင်ငံရေးထဲမှာ နားမလည်လို့ မပါဘူးလို့၊
အမှန်လုပ်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒွိဟဖြစ်နေတာတွေ…
FB မှာ False Hope နဲ့ ရေပေါ်ပို့စ်တွေနဲ့ ပေါ်ပင်မှာ ပျော်ဝင်နေကြသူတွေ….
….. စတဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ…
ဂွင်ထဲ တန်းဝင်သွားတဲ့ စကစတို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါး မှိုင်းတိုက်ခံထားရလို့ မှိုင်းမိနေတယ်ဆိုတာကို အသိ၊ သတိနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး ခရီးပန်းတိုင် အမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့ အားလုံးရဲ့ မလျော့သောဇွဲ လုံးလ ဝီရိယ စိုက်ထုတ်ပေးကြဖို့ အဓိက လိုအပ်နေပါတယ်။
ဘဏ်များ လုံးဝ ဒေဝါလီမခံပါ။
နိုင်ချင်သူများ တပ်သား ၁ ယောက်၊ ဗိုလ်ကြီး ၁၀ယောက် အကွက်မဖြစ်ဖို့လို။
အချို့အောက်ခြေ လူတန်းစားများ ငတ်နေကျ။
အချို့ အလယ်လတ်တန်းစားများ ဟန်မပျက်ငတ်။
အထက်တန်းစားများ အပြုံးမပြတ် မှောင်ခိုဘက်။
လျှာခလုတ်တိုက်နေကြတဲ့ အသိုက်များ သဘာဝ သံယံဇာတများ​ဖြင့် ​သက်ဆိုးဆက်ရှည်နေပါကြောင်း။
Dawei Thar Lay says:
2021-10-21 at 5:43 PM
ျပည္သူကစားကြက္ထဲ၀င္လာတဲ့စကကလား ဒါမဟုတ္ စကစကစားကြက္ထဲ၀င္လာတဲ့ crph nug pdfလား
2021-10-21 at 7:15 PM